Mpanamboatra sy mpamatsy entana amin'ny ambongadiny | Ara-potoana
Fandefasana entana an-habakabaka avy any Shina - Ny sarany tsara indrindra amin'ny Air Cargo Iraisam-pirenena Miaraha mieritreritra ny fiaraha-miombon'antoka dia teny efa be loatra, saingy mandeha amin'ny fomba ilazana ny serivisy mifantoka amin'ny mpanjifa izany. Izahay ...
Fanaterana an'habakabaka Fandefasana Avy any Chine - Taratasy tsara indrindra amin'ny Air Cargo International
Ny fiaraha-miasa dia teny efa be mpampiasa, fa mandeha amin'ny fomba kely fotsiny amin'ny famaritana ireo serivisy mifantoka amin'ny mpanjifa. Miezaka izahay hitondra zavatra betsaka kokoa amin'ny fifandraisana fa tsy fomba iray hanatrarana ny mpanjifanao manerana an'izao tontolo izao.
Iraisam-pirenena entanany fandrosoana dia matetika fiasa mampifandanja ny fotoana, ny vidiny ary ny olana ara-tontolo iainana. Izany no antony iray isafidianan'ny orinasa ny GZ Ontime amin'ny vidiny mirary sy milamina amin'ny entany. Tahaka azy ireo, azonao atao ny matoky fa ny fifanarahana stratejika manerana an'izao tontolo izao dia manome anao ny fahalalahana hisafidy amin'ny habakabaka sy ny ranomasinaentanasafidy fanompoana. Namboarina tamim-pahamendrehana amin'izay ilainao tsara, feno amin'ny fahitana farany hatramin'ny farany.
Manolotra serivisy fitaterana an'habakabaka avy any Shina amin'ny firenena hafa izahay, na afaka manampy anao hanafatra any Shina izahay. Ho an'ny zotram-pitaterana an'habakabaka any Eropa, ohatra, ny fahatarana amin'ny fampitana entana amin'ny rivotra dia hatramin'ny 7 andro, izay haingana kokoa noho ny mahazatra 35/40 andro amin'ny alàlan'ny fitaterana an-dranomasina.
Ny tambajotran'ireo mpiara-miasa matihanina voasedra tsara dia mamela anay hitantana ny fandefasana azy ireo amin'ny fotoana fohy sy amin'ny fanemorana tsara indrindra.
Ny zotram-piaramanidina dia mety amin'ny karazana vokatra rehetra, manomboka amin'ny marefo indrindra ka hatramin'ny mavesatra indrindra.
Hentitra loatra ny fitsipiky ny Air, izany no antony nametrahanay ny sainay rehetra handinika tsara ny fangatahanareo. Aorian'ireny famakafakana marina ireny amin'ny fangatahanao dia hiantoka anao ny serivisy fitaterana entana mifanentana amin'ny antenainao sy ny zavatra ilainao ary ny toetran'ny entanao.
Ny fandefasana ny rivotra iraisam-pirenena dia mety ho dingana sarotra, miaraka amin'ny fitantanan-draharaha, ny fitsipika ary ny mahita ny vidiny mirary indrindra sy ny lalana tokony hiadiana. Hainay ny manavesatra izany, koa avelao izahay hanatsotra ny anaofampitaovana ho anao.
Ny ekipanay efa za-draharaha dia afaka manampy amin'ny lafiny rehetra amin'ny fizotry ny fandefasana. Noho izany, tsy mila matahotra ianao satria manome toky fa serivisy azo antoka sy tsy misy korontana tanteraka.
Rehefa misafidy anay ianao, na dia mila bebe kokoa amin'ny serivisy amin'ny rivotra aza ianao, dia hihoatra ny mihoatra izahay handanjalanjana fandefasana tonga lafatra. Isika tsirairay sy ny zava-drehetra ataontsika mba hahatonga anao manontoloFitaovam-pitaterana traikefa hahafeno ny zavatra antenainao.
1. Seranam-piaramanidina mankany amin'ny seranam-piaramanidina, isam-baravarana, varavarana mankany amin'ny seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina mankany amin'ny varavarana
2.DDP (Fandoavana adidy andoavam-bola), DDU (adidy fanaterana tsy voaloa)
4.Ny tanety Fitaovam-pitaterana fandaharana
Fiantohana 5. Cargo
6. Fanaraha-maso fandefasana mora
7.Safe fonosana sy crating
Ny GZ Ontime dia mirehareha foana amin'ny fanomezana anao ny zavatra niainantsika tamin'ny fandefasana an'i Sina ho an'izao tontolo izao noho ny filanao amin'ny Air Freight.
Teo aloha: Seranan-dranomasina
Fandefasana rivotra DDP
DDP amin'ny rivotra